Ny fisintomana rehetra ho an'ny Preprar3D v1
Helikoptera lehibe ho an'ny FSX ary P3D. izany addon misolo tena telo karazany: fitaterana miaramila (tontonana russian). Fitaterana mpandeha tsotra (tontonana anglisy). Ambulance (HA-BGH - fananganana panel) avy amin'ny fiaramanidina fiaramanidina Budapest
Embraer ERJ 135 Isan'ny fandoavana maro FSX & P3D
Ity misy modely avo lenta sy antsipirihany momba ny Embraer ERJ-135 notarihin'ny ekipa ex POSKY. izany add-on teratany izao FSX ary mifanaraka amin'ny Prepar3D v4 sy v5.
Amin'ny alàlan'ny Model by Project Open Sky (POSKY). Modely VC nataon'i Jacob Kubique sy Corey Ford. FSX ny fivondronana teratany avy amin'i Speedbird77. Feo nataon'i Christoffer Petersen
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 21 Valiny 1 - 19 amin'ny 382